(Sawirro) Xog:c/qaasim salad maxaa uu ku qanciyey madaxweyne farmaajo farina u soo direy shacab ka soomaliyeed. - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada (Sawirro) Xog:c/qaasim salad maxaa uu ku qanciyey madaxweyne farmaajo farina u soo...
(Sawirro) Xog:c/qaasim salad maxaa uu ku qanciyey madaxweyne farmaajo farina u soo direy shacab ka soomaliyeed.
Muqdisho (Banaadirsom)-Waxaa magaalada Qaahira ee dalka Masar ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee dalka C/qaasim Salaad Xasan oo muddooyinii ugu dambeeyay ku noolaa dalka Masar.
Madaxweyinihii hore Cabdiqaasim Salaad Xassan ayaa ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed inay garab istaageen dowladooda, isagoo mar uu ka hadlayey dhibaatada Al Shabaab ay ku heyso dadka Soomaaliyeed ku tilmaamay mid caqabad ku ah hormar iyo amni Soomaaliya ka hana qaada.
Waa markii labaad oo uu Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi farmaajo la kulmayo Madaxweyinihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xassan oo mudooyinkii danbe ku noolaa Dalka Masar.
Sidaan oo kale markii hore markii ay ku kulmeen magaalada Qaahira, waxaa qeybaha kala duwan ee warbaahinta la hadlay C/qaasim Salaad Xasan oo ku baaqayay xiligaasi in laga wada shaqeeyo danta ummadda Soomaaliyeed.
Kulanka labada madaxweyne ayaa kusoo aadaya iyadoo culees badan uu heysto dowladda madaxweyne Farmaajo oo aad mucaaradka ay ku dhaliilayaan habka dhaqanka siyaasadeed ee xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay.